Chautari Daily » शिल्पाको पिडा कस्ले बुझ्यो ?
शिल्पाको पिडा कस्ले बुझ्यो ?
काठमाडौं ३ श्रावण / पछिल्लो समय निर्माता छविराज ओझा र शिल्पा पोखरेलको विषयमा नेपाली सिने क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् । प्रतिक्रियामा दिने क्रममा कोही छविराजको पक्षमा बोल्दै आएका छन् भने कोही शिल्पाको पक्षमा त कोही दुबै जनाले यसो गर्न नहुने भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
केही समय पहिले नायिका केकी अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एक घुमाउरो स्टाटस् लेखेकी थिइन् । अहिले उनी एक अन्तर्वतामा शिल्पाको विषयमा बोलेकी छिन् । यस अघि पनि नेपाली चर्तित कलाकारहरू किशोर खतिवडा, पियंका आयुषमान, स्वस्तिमा लगायतका कलाकारहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
नेपाली सिने क्षेत्रमा चर्चित नाम छवि ओझा यस अगाडी नै ३ पटक बिहे गरी सकेका थिए भने शिल्पा चौंथो श्रीमती हुन। शिल्पा लाई सिने दुनियाँमा लेराएर स्थापित गरेका छवि ओझाले यस अघि पनि धेरै कलाकारलाई अवसर दिएर स्थापित गरी सकेका छन्। छविले मिडियामा आएर आफूले शिल्पालाई उनले भनेको जस्तो हिंसामा नराखेको बताएका छन्।
त्यस्तै अहिले छवि र शिल्पाको विषयमा नेपाली सिने क्षेत्रका चर्चित सेलिब्रेटीहरुले आ आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ। उनी हरूले यसै विषयलाई लिएर आफ्नो धारणा विभिन्न मिडियामा दिएका छन् भने कतिले आफ्नो फेसबुक मार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उता छबि र शिल्पा पनि विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदै एकले अर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित मिति ३ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०९:५३